Mpanamboatra tavoahangy fitaratra / tavoahangy fitaratra, mpamatsy - Sinaina tavoahangy fisotro misy alika / jar vita amin'ny tavoahangy
250ml tavoahangy fisotroana vera mainty misy fonony aluminium
Ny tavoahangin-tsiranoka ranom-boasary milanja 250ml dia azo ampiasaina hametrahana vokatra marobe isan-karazany ao anatin'izany ny ranom-boankazo, ny rano, ny fikotrana ronono ary maro hafa. Na inona na inona ao anatiny, dia ho kanto sy kanto izy ireo ao amin'ity tavoahangy ity. Raha mila manisy marika na manaingo manokana ny tavoahanginao ianao dia azo omena anarana mora foana miaraka amin'ny fampahalalana momba ny vokatrao. Mba hanamorana ny fiainanao!
Tavoahangy ranom-boankazo vera 8oz 16oz mivelatra amin'ny vavony vy
Ity tavoahangy ity dia mety amin'ny zava-pisotro feno. Alao an-tsaina ny fametrahana grapefana na ranom-boasary ao anatin'ireto tavoahangy ireto? Raha ampitahaina amin'ny lalao hafa dia hanao fampisehoana tsara izy ireo.
300ml tavoahangy mineraly voajanahary avy any Nouvelle-Zélande misy satroka visy
Ny tavoahangy fitaratra mazava 500ml dia tena mety amin'ny soda na rano mineraly ary ny mpivarotra zava-pisotro avo lenta, fivarotana lehibe sy indostria hafa. Noho ny fahaizany sy ny endriny mahazatra, dia azo ampiharina amin'ny sehatry ny zava-pisotro rehetra misy anao izy io.
1000ml tavoahangy ronono fitaratra frantsay litatra 1 litatra misy sarony plastika tsy misy porofo
Ity tavoahangin-dronono vera ity dia mety tsara amin'ny fikarakarana zava-pisotro isaky ny misy fotoana, na fety izany, na fampakaram-bady na fitsangatsanganana. Izy ireo dia lehibe amin'ny habe, izy ireo no refy mety amin'ny fisotroana, ary mora diovina! Izy ireo koa dia tena mety ho haingon-trano na toy ny voninkazo hametrahana latabatra. Ireo tavoahangy vita amin'ny style "vintage" vita amin'ny vera ireo dia miaraka amin'ny fonony plastika tsy misy porofo manamarina azy ireo fa mety amin'ny fety sy fankalazana na fanomezana any an-trano. Azonao atao ny mampiasa azy ireo hatrany hatrany.
Tavoahangy fitaratra misy paompy famaohana, Tavoahangy paompy fitaratra ho an'ny menaka tena ilaina, Tavoahangy fitaratra fitaratra misy paompy, Tavoahangy paompy fitaratra, Tavoahangy paompy fitaratra ho an'ny shampoo, Tavoahangy fitaratra miaraka amina famoahana paompy,